Fikambanana milaza ho tsy manao politika afa-tsy ny politikam-pampandrosoana izy io. Mahatsiaro izy ireo, araka ny nambaran’ny Sekretera Jeneraliny, Atoa Randriamamiarizafy Ignace mpandraharaha, fa mitanila amin’ny ankapobeny ny fampandrosoana ny Faritra Alaotra Mangoro. satria Saika mivangongo any Alaotra avokoa mantsy ny fanapahan-kevitra rehetra vao miverina aty aminay aty Mangoro ny ampahany nefa izahay dia manana herijika manokana ny hampandroso ny misy anay ho Faritra manokana. Misy ato aminay Ambatovy mpitrandraka harena ankibon’ny tany, ny ala lehibena hazo “Pins” sy ny fitrandrahana azy, ny toerana malaza hampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany toy ny ao amin’ny “Parc national Andasibe”. Mino izahay fa tsy handraraka ilo mby an-doha hanohana ny hetahetanay hizaka tena manokana ara-paritra ireo olomboafidy senatera 1 sy solombavambahoaka 3 mpanao lalàna voafidy avy aty amin’ireo distrika roa ireo, hoy izy.